ယူကျုဘာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ယူကျုဘာ (YouTuber) ဆိုသည်မှာ ဗီဒီယိုမျှဝေခြင်း ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သော ယူကျု(ဘ်)တွင် ဗီဒီယိုများထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးသော လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ခေါ်ဆိုသည်။ အထူးသဖြင့် ၎င်း၏ အဓိက ယူကျု(ဘ်)ချန်နယ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အများအပြား၊ ပလပ်ဖောင်း၏ စိတ်ကြိုက်စာမျက်နှာခွဲများဖြင့် တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝေါဟာရကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်၌ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
PewDiePie သည် ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ၄ ခုမြောက် စာရင်းသွင်းမှုအများဆုံးချန်နယ် ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် စာရင်းသွင်းမှုအများဆုံး လွတ်လပ်သော ယူကျုဘာ ဖြစ်သည်။
ဩဇာကြီးမားသော ယူကျုဘာများကို မိုက်ခရိုအနုပညာရှင်များအဖြစ် မကြာခဏ ဖော်ပြကြသည်။ ယူကျု(ဘ်)သည် အောက်ခြေမှအပေါ် လူမှုမီဒီယာ ဗီဒီယိုပလပ်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် ကျယ်ပြန့်စွာ သန္ဓေတည်ထားသောကြောင့် မိုက်ခရိုအနုပညာရှင်များသည် ထင်ရှားကျော်ကြားသူများ၏ သဘောသဘာဝဖြစ်သော စီးပွားဖြစ်ပုံစံဖြင့် မတင်ဆက်ပဲ ကိုယ်ပိုင်စီမံမှုနှင့် လွတ်လပ်မှုပုံစံဖြင့် တင်ဆက်သည်။ ၎င်းပုံစံသည် ယူကျု(ဘ်)ကို ကြားခံအဖြစ် အသုံးပြု၍ အနုပညာရှင်နှင့် ကြည့်ရှုသူကြား တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးထားသည့်အပြင် ယူကျုဘာများကို ပိုမိုရင်းနှီးပြီး စစ်မှန်ကြောင်း ရှုမြင်လာစေသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် တောင်ပိုင်း ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်မှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အသက် ၁၃ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အရွယ်များအကြား ယူကျု(ဘ်)မှ နာမည်ကြီး ၁၀ ယောက် သို့မဟုတ် သမာရိုးကျနာမည်ကြီး ၁၀ ယောက်ကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရာ ယူကျု(ဘ်)မှ နာမည်ကြီးများသည် ပထမအဆင့်ငါးနေရာအတွင်း ရပ်တည်ခဲ့ပြီး အမေရိကန် ယူကျု(ဘ်) ဟာသအနုပညာရှင် နှစ်ယောက်တွဲအဖွဲ့ဖြစ်သော Smosh က ဩဇာအရှိဆုံးအဖြစ် အဆင့် ၁ ရပ်တည်ခဲ့သည်။  ၎င်းစစ်တမ်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တစ်ဖန်လုပ်ခဲ့ပြီး ယူကျုဘာ ခြောက်ဦးက ပထမအဆင့်ခြောက်နေရာအတွင်း ရပ်တည်ခဲ့ပြီး KSI သည် ဩဇာအရှိဆုံးအဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။  Zoella နှင့် PewDiePie ကဲ့သို့သော ထင်ရှားသော ယူကျုဘာအများအပြားနှင့် ၎င်းတို့၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုသည် သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများအတွက် အဓိကအကြောင်းအရာများ ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း လေ့လာမှုများအရ ယူကျုဘာသည် ကလေးများ၏ ဆန္ဒအရှိဆုံး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။  
ယူကျုဘာများ၏ လွှမ်းမိုးမှုသည်လည်း ပလက်ဖောင်းထက် ကျယ်ပြန့်လာသည်။ ယူကျုဘာအများအပြားသည် ပရဟိတအတွက် ငွေရှာရန် သို့မဟုတ် လူမှုရေးကိစ္စများကို ဟောပြောရန် ၎င်းတို့၏ ဩဇာကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထင်ရှားသော ဥပမာများတွင် MrBeast နှင့် Mark Rober တို့သည် ၎င်းတို့၏ Team Trees လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ကျော် ရရှိအောင် ကူညီပေးခဲ့မှုနှင့်  ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ရောဂါအား တုံ့ပြန်မှုအတွက် ဘရာဇီးသမ္မတ ဂျိုင်ယာ ဘိုဆိုနာရိုကို လူသိရှင်ကြားဝေဖန်ခဲ့သော Felipe Neto တို့ ပါဝင်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် "တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်း"သည် ယူကျုဘာများဖြစ်သူ Felipe Neto နှင့် JoJo Siwa တို့ကို ကမ္ဘာ့ဩဇာအရှိဆုံး လူ ၁၀၀ စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ 
ယူကျုဘာများသည် Google AdSense မှ ဝင်ငွေရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် Patreon ကဲ့သို့သော ပလပ်ဖောင်းများကို အသုံးပြု၍ တွဲဖက်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့ဝင်များမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ဝင်ငွေကို ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။ လူကြိုက်များသော ချန်နယ်များသည် အခကြေးငွေပေးသော ကော်ပိုရိတ်စပွန်ဆာများကို ဗီဒီယိုများတွင် ပါဝင်ရန် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဝေါလ်မတ်၊ Nordstrom နှင့် အခြားလုပ်ငန်းများသည် ဩဇာလွှမ်းမိုးသူ ယူကျု(ဘ်)ကြယ်ပွင့်များနှင့် ချိတ်ဆက်လက်တွဲကြသည်။
ယူကျု(ဘ်)၏အစောပိုင်းကာလများတွင် ဗီဒီယိုများကို တင်ဆက်ပြီး ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ငွေရှာရန်နည်းလမ်း မရှိပါ။ ဝဘ်ဆိုက်၏ အကြောင်းအရာအများစုမှာ အိမ်လုပ်ဗီဒီယိုများဖြစ်ပြီး ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ငွေရှာရန် အစီအစဉ်မရှိသော ဝါသနာရှင်များက ထုတ်လုပ်တင်ဆက်သည်။  ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ ပထမဆုံး ပစ်မှတ်ထားသော ကြော်ငြာသည် သုံးစွဲသူများအား ကြော်ငြာကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် သီးသန့်အကြောင်းအရာကို ကြည့်ရှုခွင့်ပေးခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသော ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုခွင့်ပေးသည့် ဗီဒီယိုကြော်ငြာပုံစံဖြင့် ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးသောကြော်ငြာသည် Fox ရှိုး၏ "Prison Break" ဖြစ်ပြီး ပဲရစ် ဟီလတန်ချန်နယ်၏ ဗီဒီယိုများအထက်တွင် ပေါ်နေခြင်းပုံစံ ဖြစ်သည်။  ယူကျု(ဘ်)သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ဗီဒီယိုပြနေစဉ်အတွင်း ကြော်ငြာများကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကြိုတင်ကြော်ငြာများ မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ယူကျု(ဘ်)သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အချို့သော မက်ထရစ်များနှင့် ကိုက်ညီသော ချန်နယ်များ (ယခင်နှစ်တွင် စာရင်းသွင်းသူ ၁၀၀၀ နှင့် အများသူငှာ ကြည့်ရှုမှု နာရီပေါင်း ၄၀၀၀)ကို ၎င်းတို့၏ ဗီဒီယိုများတွင် ကြော်ငြာပြသပြီး ငွေရှာနိုင်စေမည့် ပါတနာပရိုဂရမ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ ပါတနာပရိုဂရမ်သည် ယူကျု(ဘ်)တစ်ကိုယ်ရေ တစ်ကာယသမားများအတွက် ပလက်ဖောင်းမှ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရန် ပထမဆုံးအကြိမ် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်များအတွင်း ပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိ အောင်မြင်မှုများကြောင့် ယူကျုဘာများ၏ ကြွယ်ဝမှုနှင့် ကျော်ကြားမှုများက သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် "Business Insider" သည် ယမန်နှစ်က ယူကျု(ဘ်)တွင် ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိသူမှာ ဝက်ဘ်စီးရီး "Annoying Orange" ၏ ဖန်တီးသူ Dane Boedigheimer ဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၅၇,၀၀၀ ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ငါးနှစ်အကြာတွင် "Forbes မဂ္ဂဇင်း" သည်ထိပ်တန်း ဝင်ငွေအမြင့်မားဆုံး ခန့်မှန်းစာရင်းအရ ယူကျုဘာ PewDiePie မှာ ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းရရှိခဲ့ပြီး ယခင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းမှာ ဝင်ငွေရရှိခဲ့သည့် Cameron Diaz၊ Gwyneth Paltrow ကဲ့သို့သော အချို့သော ထိပ်တန်းလူကြိုက်များသော သရုပ်ဆောင်တွေထက် ပိုရရှိခဲ့သည်။ "Forbes" ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ထိုနှစ်တွင် ဒဿမမြောက် ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိသူမှာ Rosanna Pansino ဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၂.၅ သန်းဖြစ်သည်။ ယူကျု(ဘ်) အသိုက်အဝန်းအတွင်း ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများက လျင်မြန်စွာထိုးဖောက်လာခြင်းကြောင့် အချို့သောသူများက ပလက်ဖောင်း၏ ဗဟိုချက်ဖြစ်သော တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် ၎င်းတို့၏ ပရိတ်သတ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများထက် ဝင်ငွေများအပေါ် ပိုမိုအာရုံစိုက်လာသည့်အတွက် ယူကျုဘာများကို ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။   ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် Kevin Paffrath သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမ ၃ လအတွင်း ဒေါ်လာ ၅ သန်း ရရှိခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာများ ထွက်ရှိလာပြီး ၎င်း၏ ယူကျု(ဘ်) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်များက လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်း ကြော်ငြာဝင်ငွေ "သန်းပေါင်းများစွာ" ရရှိခဲ့ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။
↑ YouTuber (in en)။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Jerslev, Anne (October 14, 2016). "In the Time of the Microcelebrity: Celebrification and the YouTuber Zoella" (in en). International Journal of Communication 10 (2016): 5233–5251. ISSN 1932-8036.
↑ Hamedy၊ Saba (2016-12-28)။ 'YouTuber' isareal word now because the Oxford English Dictionary says so (in en)။
↑ Alexander၊ Julia (August 26, 2019)။ PewDiePie Becomes the First Individual YouTube Creator to Hit 100 Million Subscribers။ Vox Media။
↑ Spangler၊ Todd (September 12, 2019)။ Top YouTuber PewDiePie Withdraws $50,000 Pledge to Anti-Defamation League, Calls Ita'Mistake'။ Penske Business Media။
↑ Gamson, Joshua (2011). "The Unwatched Life Is Not Worth Living: The Elevation of the Ordinary in Celebrity Culture".
↑ ၇.၀ ၇.၁ Dredge၊ Stuart (February 3, 2016)။ Why are YouTube stars so popular? (in en)။ Dredge, Stuart (February 3, 2016). "Why are YouTube stars so popular?". The Guardian. Archived from the original on February 3, 2016. Retrieved May 3, 2018.
↑ Ault၊ Susanne (2014-08-05)။ Survey: YouTube Stars More Popular Than Mainstream Celebs Among U.S. Teens (in en-US)။
↑ Ault၊ Susanne။ "Digital Star Popularity Grows Versus Mainstream Celebrities" (in en-US)၊ July 23, 2015။
↑ Beers Fägersten, Kristy (August 1, 2017). "The role of swearing in creating an online persona: The case of YouTuber PewDiePie" (in en).
↑ Weiss၊ Geoff (May 24, 2017)။ The Most-Desired Career Among Young People Today Is 'YouTuber' (Study)။
↑ Leskin၊ Paige (July 17, 2019)။ American kids want to be famous on YouTube, and kids in China want to go to space: survey။
↑ Dzhanova၊ Yelena (August 3, 2019)။ Forget law school, these kids want to beaYouTube star။
↑ Williams၊ David (October 31, 2019)။ YouTube star MrBeast wants to plant 20 million trees. Elon Musk, Jack Dorsey, and more are helping him do it.။
↑ Phillips၊ Dom (November 12, 2020)။ Felipe Neto: howaYouTuber became one of Jair Bolsonaro's loudest critics။
↑ Felipe Neto Is on the 2020 TIME 100 List (September 22, 2020)။
↑ JoJo Siwa Is on the 2020 TIME 100 List (September 22, 2020)။
↑ ၁၉.၀ ၁၉.၁ Evan Edinger: The five ways YouTubers make money (in en-GB) (December 18, 2017)။
↑ "Walmart, Nordstrom and others look to YouTube stars to woo millennials and Gen Z"၊ August 6, 2018။
↑ YouTube hits 100m videos per day။ BBC News (July 17, 2006)။
↑ Will All of Us Get Our 15 Minutes OnaYouTube Video? (August 30, 2006)။
↑ ၂၃.၀ ၂၃.၁ YouTube expands types of advertising။ NBC News (August 22, 2006)။
↑ YouTube Shuns Pre-Roll Video Advertising (August 22, 2006)။
↑ ၂၅.၀ ၂၅.၁ Infographic: The History of Video Advertising on YouTube (August 3, 2011)။
↑ YouTube Partner Program overview & eligibility။ YouTube Help။
↑ Wei၊ Will (December 29, 2010)။ Meet The YouTube Stars Making More Money Than EMTs, Cops, Firefighters, And Teachers။
↑ Berg၊ Madeline (October 14, 2015)။ The World's Highest-Paid YouTube Stars 2015။
↑ Bloom၊ David (July 3, 2014)။ YouTuber Dilemma: Staying 'Authentic' Amid 4K Cameras, Studio Money, Ad Dollars။
↑ YouTubers: Money First, Fans Later (June 2, 2018)။
↑ Whelan၊ Robbie။ "The Social-Media Stars Who Move Markets"၊ 2021-08-27။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယူကျုဘာ&oldid=733714" မှ ရယူရန်
၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၇:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။